နယူးစာအုပ်မကြာခင်မှာပဲလာ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အကြှနျုပျ၏အသစ်စာအုပ်, တက်, ဇန်နဝါရီလ 27 ထွက်ကြွလာ! စာအုပ်များရောင်းချနေရာတိုင်းမှာကြောင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်. သငျသညျယခုယူမှုကိုကြိုတင်မှာစာအုပ်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Risebook.tv. ငါသည်ထာဝရဘုရားတက်ရဖို့ကိုငါ့မျိုးဆက်အားပေးဖို့အသုံးပြုနိုင်သည်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဆုတောင်းပဌနာ. အပေါ်ကနောက်တွဲယာဉ် Watch နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာအုပ်၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ဖတ်:
Burton • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 6:29 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီတော့ဒီစာအုပ်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း '' တက်ဖောင်းပွ! ကောင်းမွန်သောဘဝကိုဖတ်ရှုပြီးနောက် (ငါ့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားအတွက်အများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်), ငါသည်ဤစာအုပ်တွင်ပင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်ကြောင်းပြောပြနိုင်!
ဒါဝိဒ်သည် • ဒီဇင်ဘာလ 25, 2014 တွင် 3:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသေချာပေါက်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်! ဗီဒီယိုလေး! ;)